CO2 Laser nokuveza achiita zvokutemera muchina - China Dongguan Glorystar Laser
Product Feature CO2 Laser achiita zvokutemera uye nokuveza muchina dzakatevedzana adopts dzakawanda yemhando DSP kudzora michina, vane kumhanya, mukuru nokuveza yakarurama uye yakakwirira pakusimba, unhu uye mutengo reshiyo chaizvo. Huru Hurongwa inogona akarayira U-dhisiki pasina PC kubatana. Rine mashandiro anoita chemufananidzo nokuveza, ruvara Kuparadzaniswa nokuveza, etc. non-kurega achicheka kamwe kure simba, Mechanical Design nyaya muchina ane chaiwo zvokuimba kuvaka uye anoshongedza pamwe hwakasimba ...
CO2 Laser achiita zvokutemera uye nokuveza muchina dzakatevedzana adopts dzakawanda yemhando DSP kudzora michina, vane kumhanya, mukuru nokuveza yakarurama uye yakakwirira pakusimba, unhu uye mutengo reshiyo chaizvo. Huru Hurongwa inogona akarayira U-dhisiki pasina PC kubatana. Rine mashandiro anoita chemufananidzo nokuveza, ruvara Kuparadzaniswa nokuveza, non-kurega achicheka kamwe kure simba, etc.
Dzino muchina ane chaiwo zvokuimba kuvaka uye anoshongedza anyatsonzwisisa uye akatsiga panze wakakombama. It adopts kumhanya chokunze richitungamirira njanji, kupinza paunenge injini uye mutyairi kuvandudza rakarurama zvokuimba transmissibility.
Pokushandisa kupinza izvo nezvionioni pamusoro Manyiminya hurongwa kuitira refu oupenyu Laser chubhu uye yakakwirira okurwadzisa kunyatsoshanda.
Achiita zvokutemera uye nokuveza bepa, jira, mapurasitiki, vasiri dzakarukwa jira nguvo uye chitoyi Mazinga, uyewo yemubatanidzwa pamusoro zvinonyatsochengeta nokuveza vasiri-metal zvinhu, kufanana acrylic uye MDF bhodhi iri handbag, gurovhisi, chakuvhuvhu, okushambadza, kushongedzwa, zvemagetsi mudziyo uye epurasitiki maindasitiri.
Mudenga, bepa, dehwe, jira, makemikari girazi, nebwe, acrylic, woolens, mapurasitiki, rabha,
zvedongo, rekristaro, nejedhi, yemishenjere nevamwe vasiri-metal zvinhu.
achiita zvokutemera Speed 0-64m / m
Dzokorora Kutaura ± 0.05mm
Kufambira System CNC kudzora maitiro
kutonhora Mode Water-kutonhora uye kudzivirirwa hurongwa
Kunopindirana Power kunwa ≤1250W
uchishandisa Temperature 0 ~ 45ºC
uchishandisa Humidity 5% -95%
kudzora Software Glorystar Laser Software
Graphic Vachitsigirwa Format PLT, AI, jpg, PNG, TIF, PCX, Tag,
Next: Internet Laser rokuisa chiratidzo muchina
Metal achiita zvokutemera Machine
Metal Laser achiita zvokutemera Machine
Laser achiita zvokutemera Zvino Kucheka Machine CMA-1080
GLC-1610 Laser nokuveza achiita zvokutemera Machine
GLC-960 Laser nokuveza achiita zvokutemera Machine